Tantaran'ny Tontolo Warcraft | Solosaina Teknolojia Global Lahatsoratra Vohikala.WS | GVMG - Global Viral Marketing Group
Tantaran'ny Tontolo Warcraft
Solosaina Teknolojia Global Lahatsoratra Vohikala.WS > Rehetra > Tantaran'ny Tontolo Warcraft
Izao tontolo izao Warcraft no ho lehibe indrindra lalao malaza Warcraft tantara mitohy izao Tontolo izao Warcraft mahatalanjona fahombiazana satria ny fanokafana ny volana novambra 2004. Dia gaga ny lalao tsikera ary dia voasinton'ny an-tapitrisany ny mpilalao, izay nanompo ny tontolo izao fa ny lalao dia namorona. Izany dia tsy misy intsony fotsiny ny lalao, saingy ankehitriny tena marina ny zavatra, ary ny iray dia mampiseho fa tsy misy sora-baventy abating. Izany no iray amin'ny famaha lalao vao haingana times, ary mijoro ho toy ny goavana ny lohateny ho an'ny online gaming. Izao tontolo izao Warcrafts antso lainga fa izany dia namorona tena miasa amin'ny serasera izao tontolo izao. Ity massively multiplayer online anjara-milalao lalao dia voafaritra ao amin'ny tontolon'ny Azeroth, iray mahafinaritra ny tany dia rakotry ny mahery fo sy monsters sy ny maro hafa creatures. Ny lalao hery dia fa functions maha-zava-niainany, amin'ny maha-izao tontolo izao fa misy ao aminy manokana ny resaka fa mety hitsidika sy hizaha raha ianao azafady. Izao tontolo izao Warcraft dia ny faha-4 ny lohateny ao amin'ny andiana Warcraft lalao, izay no izy ho an'ny olona mihoatra ny folo taona. Ny tantara mitohy nanomboka 1994 miaraka amin'ny lalao Warcraft: Orcs sy ny Olombelona, tena fotoana paikady lalao voafaritra ao anatin'ny Azeroth. Izany dia tsara ny lohateny, ary tsara ny fampidirana ny tantara mitohy, nefa raha ny marina ny franchise dia vao mahazo nanomboka. Ny tsara indrindra dia mbola ho avy. Marina tokoa, izany wasnt mandra - 1995 ary ny famoahana ny faharoa lalao, [object Window] 2: Misosa araka ny onja ny Haizina, fa ny tantara mitohy tena hita ny feo. [object Window] 2 dia masterpiece, ary izany nohatsaraina momba ny lazao ny tany rehetra ny fahatsapana ny. Ny lalao dia sary mahafinaritra, mahafinaritra fitantarana sy mahavariana, [object Window]. Ny fenitra avo ny andiany mitohy any 2002, miaraka amin'ny famoahana ny Warcraft 3: Hanjaka ao ny Korontana. Ity dia fomba hafa sy miavaka ny lalao ao amin'ny manokana ny zo. Ny koa ny Tontolo Warcraft ireo rehetra nahafinaritra mihitsy. Blizzard Fialamboly namoaka rehetra Warcraft-boninahitra, ary ny lalao nahasarika lehibe manaraka. Rehefa Blizzard dia nanambara fa nisy ny handeha ho 4 lalao ao amin'ny tantara mitohy, izany dia voajanahary, fa ny olona no liana. Izany tombontsoa manamafy rehefa nipoitra ny vaovao Warcraft ny lohateny dia handeha ho an-tserasera multiplayer lalao. Izao tontolo izao Warcraft mety hampisy Azeroth kokoa ifanakalozana sy redefine izany ho toy ny zavatra niainany. Ny mpankafy ny tantara mitohy dia ambony ny fanantenany ho an'ny Tontolo Warcraft, noho izy nampanantena ny ho terrific sy ahitana zava-baovao ny vaovao lohateny. Blizzard nanao fitsapana beta nandritra ny lalao tamin'ny volana Martsa 2004, ary nanome voafaritra ny mpilalao iray topy maso. Ireo izay nilalao azy io dia tena gaga sy nahazo tsara ny fahitàn'ny. Ny ho fiatrehana ny lalao fanafahana lehibe matanjaka toy ny 2004 nandeha tany amin'ny. Izao tontolo izao Warcraft no nandefasana ofisialy ny any Amerika Avaratra tamin'ny talata teo ny 23 novambra 2004. Izany no tsara nahazo tsikera avy. Ny fanokafana dia goavana ny fahombiazana, ary dia nahavita goavana ny varotra ao ny andro voalohany namoahana. Blizzard fa vinavinaina ho 240,000 copies no amidy ao ny andro voalohany irery. Ireto dia mandrakitra ny isa ho an'ny lalao ity genre sy ny sisa izao Tontolo izao Warcraft lasa haingana-mivarotra an-tserasera ny lalao eo amin'ny tantara. Izany dia namely ny hamotika ny fitaovana. Izao tontolo izao Warcraft mavesa-danja ity fahombiazana; raha ny marina, ny lazan'ny ny lalao nanomboka snowball. Tena nandray off ary tratra ny vahoaka manao maro, amin'ny olona maro dia maro ny naha-zendana izany. 2005 nahita ny lalao explode ho global obsession. Tamin'ny febroary no natomboka any Eoropa ary any amin'ny volana jona ity no nalefa any Shina, amin'ny firenena hafa manaraka mifandanja. Izany dia nanaporofo tena malaza na aiza na aiza izy io no navoaka, ary araka ny 2005s akaiky izany dia mihoatra ny dimy tapitrisa manerantany ireo mpikambana ao amin'ny facebook. Izao tontolo izao Warcraft efa nivoatra satria ny famoahana azy voalohany. Nisy maromaro ny fanavaozam-baovao ho an'ny lalao, ary ny tontolo ny Azeroth dia nitombo. Blizzard nanao fanatsaràna, fixed misy olana, ary niasa mba hanaovana ny lalao mpampiasa lasa fampiasa am-pirahalahiana. Izy ireo ihany koa mivelatra ny lalao, amin'ny alalan'ny fampidirana sampana toy ny Blackwing Lair, ohatra, ny dungeon lair ny Nefarion, ny iray amin'ireo kaondrana mitapy ny lalao. Tamin'ny Volana Jona 2005, Blizzard nanampy goavana ny mpilalao sy ny mpandefa votoaty amin'ny endrika roa manokana battlegrounds, Alterac Lemaka sy Warsong Gulch. Alterac Lemaka dia mamela ny mpilalao mba handray anjara amin'ny ady ny 40 amin'ny 40 ny olona, raha Warsong Gulch manome vaovao fanamby, toy ny halatra ny mpanohitra saina avy amin'ny toby. Ireo battlegrounds no tena substantial fanampim-baovao Eran-tany ny Warcraft satria izy io no navoaka. Amin'izao fotoana izao, ao 2006, Izao tontolo izao Warcraft dia toy ny malaza toy ny hatrizay. Iray expansion, mitondra ny lohateny hoe Ny Fandoroana Crusade, dia voafaritra ho an'ny fanafahana ny amin'ity taona ity, ary tokony hamelatra ny tontolo Azeroth na dia bebe kokoa. Izao tontolo izao Warcraft lasa pinnacle ny Warcraft tantara mitohy, ary dia magnificent sy distinctive lalao. Vakio bebe kokoa ny mikasika ny lalao tao http://[object Window]”>Izao tontolo izao Warcraft Volamena Vidiny ny Lisitry ny Torolalana. [object Window]://www.world-of-warcraft-gold.com Tantaran'ny Tontolo Warcraft
･ History of World of Warcraft
Sokajy: Rehetra, Lalao Tags: momba ny, [object Window], ny zava-kanto, [object Window], [object Window], [object Window], shina, ny asa-tanana, mamorona, [object Window], lalao, lalao, [object Window], volamena, sary, [object Window], tantara, [object Window], fanatsarana, [object Window], andalana, lisitry ny, [object Window], [object Window], [object Window], [object Window], atolotra, [object Window], [object Window], ny olona, lazany, varotra, fahombiazana, mandresy, asa, izao tontolo izao
Hijanona Any Mifandray Raha Any Ivelany
Iray Fianjerana Mazava Ho Azy Ao Amin'ny Myspace Ho An'ny Ray Aman-Dreny
Ajanony ny Squinting sy Hiady Eye miantraika mafy amin'ny Virtoaly Magnifying Vera
Extranets Ho An'ny Dokam-Barotra Sampan-Draharaham-Panjakana
Ahoana No Azonao Atao Ny Mandray Ny Fifehezana Ny Inbox
Ny tanjona farany ao Portability
Peta-Drindrina-Forge Tsindrio, Mamorona sy Mankalaza
Fomba Mora Hanorina Trano Tambajotra
Mandray Ny Ctrl – 20 Hitsin-Dàlan'ny Kitendry
Tsara lavitra Workflow ho an'ny mpaka sary Nomerika
Phishing amin'ny Aterineto
Microsoft Fahavitrihan'ny CRM
Hanavaka Ny Safidy Eo Amin'ny Telefaonina Na Voip Rafitra
Inona no Hyperterminal?
Sarotra Mihatra- Ny fisafidiana ny Zo Iray
Tranonkala Fampiantranoana Tranonkala Ny Fahitàn'ny
Akaiky Jereo Namaly Milina Hafatra.
fakantahaka de alta calidad